प्रधानमन्त्रीलाई कोरियाको स्टेट भिजिट गर्न अनुरोध गरेँ - डा. नवराज पन्त :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
प्रधानमन्त्रीलाई कोरियाको स्टेट भिजिट गर्न अनुरोध गरेँ - डा. नवराज पन्त
डा. नवराज पन्त, अर्थशास्त्री,जिमचोन विश्वविद्यालय कोरिया
चितवनको पिप्लेमा जन्मिएका नवराज पन्त करिब २५ वर्षदेखि कोरियामा कृषि एवं पर्यटन विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् । उनी सेमेअल अनडोङ नेपाल (नयाँ सामुदायिक अभियान–नेपाल) का प्रयोगकर्ता पनि हुन् । डा. पन्तले कोरियाको सामुदायिक अभियानलाई आफू जन्मिएको चितवनको पिप्लेमा प्रयोग गरिरहेका छन् । यति बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विकासका नयाँ–नयाँ नारा दिइरहेका छन् । यस्ता नाराका कारण केपी ओली कतै ठट्टा त कतै खुसीका पर्याय भएका छन् । वास्तवमा उनले दिएका भाषण यथार्थमा आधारित छन् कि जनतालाई अल्मल्याउने मेलो मात्र गरिरहेका छन् ? कोरिया जस्तो विकसित देशमा समेत अर्थशास्त्रीको मान्यता पाएका डा. नवराज पन्तसँग विकाससम्बन्धी कुराकानी :
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासका नयाँ–नयाँ फन्डा सार्वजनिक गरिरहेका छन्, अर्थशास्त्रीका नाताले ती कुरा कस्तो लाग्छ ?
नेताले सपना देख्नुपर्छ । देशको प्रधानमन्त्रीका नाताले ती कुरा उहाँका सपना हुन् । ती सपनाको धरातल के हो, ती कुरा कति समयमा पूरा हुन्छन् भन्ने कुराचाहिँ सम्बन्धित अर्थविद्हरूले भन्न सक्छन् ।
तपाईं पनि उहाँलाई सल्लाह दिन बालुवाटर पुग्नुभएको थियो, तपाईंले दिएको सल्लाह पनि भाषणमा आयो कि ?
म जस्ता धेरै मानिसले उहाँलाई भेटिरहन्छन् । सबै कुरा वाहिर आउने कुरा पनि हुँदैनन् । मेरो कुरा पनि वाहिर आएजस्तो लागेको छैन ।
तपाईंले दिएको सल्लाहचाहिँ के–के हुन् ?
नेपाल–कोरिया कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको ५ दशक हुन लागेको छ । नेपालमा कोरियाले दूतावास खोलेकै ४३ वर्ष भैसक्यो । भारत र चीनपछि नेपालीले बढि आयात गर्ने देश पनि कोरिया नै हो, तर यी दुई देशबीच अहिलेसम्म कुनै स्टेट भिजिट भएको छैन । न त नेपालको कार्यकारी प्रमुख कोरियाको औपचारिक भ्रमणका गएका छन् न त कोरियाका कार्यकारी प्रमुख नेपाल आएका छन् । स्टेट भिजिट नभएको मुलुकलाई कोरियाली नीतिमा प्राथामिकतामा राख्न मिल्दैन । यस्तै कारणले भूकम्पजस्तो अप्ठ्यारो पर्दा पनि नेपाललाई कोरियाले ठूलो सहयोग गर्न सकेन । मैले प्रधानमन्त्रीलाई यही कुरा बताएर चाँडै कोरियाको स्टेट भिजिट गर्न अनुरोध गरेँ ।
जम्मा एउटा मात्र सल्लाह ?
यो सानो सल्लाह होइन । यसैभित्र कोरियाबाट नेपालले के लिने, के सिक्ने, नयाँ सम्बन्ध कसरी अघि बढाउने, कस्ता–कस्ता सन्धि–सम्झौता गर्ने, नेपालमा कोरियाबाट कति लगानी कसरी भित्राउने जस्ता धेरै कुरा पर्छन् । कोरियाको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको नयाँ सामुदायिक अभियान सन् २००४ देखि नेपालमा पनि प्रारम्भ भएको छ । यही सामुदायिक अभियानले कुनै बेला नेपालभन्दा गरिब कोरिया आज संसारका धनी मुलुकमध्ये एक भएको हो । कोरियासँग आवश्यक सहयोग लिएर यो अभियानलाई नेपाल ल्याउने हो भने नेपाली ग्रामीण क्षेत्रको पूरै कायापलट हुनसक्छ । म आफैले आफू जन्मिएको स्थानमा यसको प्रयोग गर्दा यस्तो परिणाम देखेको छु । स्टेट भिजिटले यस्ता धेरै सन्धि–सम्झौता गर्न सक्छ ।
कोरियाले नेपालमा किन सहयोग गर्ने ? नेपाललाई सहयोग गर्दा उसको कुन–कुन इन्ट्ेरस्ट पुरा हुन्छ ?
सामाजिक अभियानअन्तर्गत विकसित देशले अल्प विकसित देशलाई सहयोग गर्नुपर्छ । यो संयुक्त राष्ट्र संघको घोषित नीति हो । त्यसैले कोरिया अफ्रिकी मुलुक पुगेर भए पनि आफूभन्दा कम विकसित मुलुकलाई सहयोग गरिरहेको छ । भारत–चीनबीचको नेपाल रणनीतिक महत्वको मुलुक हो । नेपालको हिमाल चढेर ६० जना कोरियन हिमाल आरोहीले ज्यान गुमाएका छन् । हजारौं नेपाली कोरियामा श्रम गरिरहेका छन् । कुनै बेला त्यहाँ भोकमरी हुँदा नेपालले हजारौं टन खाद्यान्न सहयोग गरेको थियो । आज यो देश अप्ठ्यारोमा पर्दा कोरियाले केही गर्न चाहन्छ ।
यी त भए राज्यका कुरा, तपाईंले व्यक्तिगत रूपमा कोरियाबाट के–के सिक्नु भयो ?
कोरियाका जनता आफैंले देश बनाउँछु भनेर अठोट गरेर बनेको देश हो । त्यहाँका प्रत्येक नागरिकले आधा पेट खाएर देश बनाएका हुन् । अप्ठ्यारो पर्दा आफ्ना गहना सरकारलाई दिएका छन् । त्यहाँका उद्योगपतिहरू नाफामा गएका आफ्नो कम्पनीको सेयर जनतालाई दिन्छन् र उनीहरूलाई धनी बनाउँछन् । सामसुङ कम्पनी आज विश्वव्यापी छ । त्यसको ९३ प्रतिशत सेयर जनताले किनेका छन् । उद्योगपतिले नाफामा गएको कम्पनीलाई जनतामा सेयर दिएर एकैपल्ट सडकका मान्छेलाई करोडपति बनाए । त्यहाँको गाडी कम्पनी हुन्डाईको अधिकांश सेयर जनताको हातमा छ ।
आफूले दु:ख गरेर माथि पुर्‍याएको कम्पनी किन जनतालाई दिने ? जनतामा गएपछि राम्रा कम्पनी धराशायी भएका उदाहरण धेरै छन् नि ?
कोरियामा त्यस्तो छैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा त्यहाँ यो मालिकको कम्पनी, यो कामदारको कम्पन्नी भन्ने हुँदैन । किनभने कामदारले जागीर पाएको भोलिपल्टदेखि त्यो कम्पनीको निश्चित सेयर पाउँछ । तलबबाटै उसको सेयरको पैसा कट्टा हुँदै जान्छ ।
घाटाको कम्पनीको सेयर अरूले किन्दैनन् । बल्ल–बल्ल नाफामा गएको कम्पनीलाई उद्योगपतिले किन बेच्ने ?
कोरियामा सकेसम्म घाटा हुने कम्पनी खोल्नै दिइँदैन । कुन कम्पनी खोल्दा जोखिम कम हुन्छ भनेर सरकारले नै अध्ययन गर्छ । घाटा भएको अवस्थामा सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ । भष्ट्राचारीलाई आजीवन कारोबासको व्यवस्था छ । व्यवशायीको क्षमतालाई सरकारले ठूलो विश्वास गर्छ । जब कम्पनी नाफामा जान्छ, त्यसको ठूलो सेयर जनतालाई बिक्री गरेपछि जुन पैसा आउँछ, त्यसबाट अर्को कम्पनी खोल्न प्रोत्साहित गरिन्छ । अनुभवी उद्योगपतिले आफ्नो अनुभवका आधारमा फेरि अर्को उद्योग खोलेर त्यसलाई पनि नाफामा लान्छ । यसो गर्दा उद्योगपतिको दिमागले उब्जाएको सम्पत्तिको मालिक सामान्य नागरिकहरू हुन पाउँछन् । देश र जनताको मायाका कारण यस्तो कुरा सम्भव भएको हो ।
नेपालमा यस्तो कुरा लागू गर्न सम्भव छ ?
छ, मैले प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता केही सुझाव दिएको छु । उद्योगपतिहरूलाई विश्वासमा लिएर राम्रो कानुन बनाउने हो भने नाफामा गएका सबैजसो कम्पनीलाई जनताको कम्पनी बनाउन सकिन्छ । जनताले त्यहि उद्योगका उत्पादन प्रयोग गर्छन् । अहिले रेमिट्यान्सका कारण नेपालीहरूसँग थोरबहुत पैसा छ । मेरो विचारमा विनोद चौधरीले ठूलो दिमाग लगाएर वाइवाइलाई विश्वव्यापी ब्रान्ड बनाए । अब नेपालको वाइवाइलाई जनताको हातमा सुम्पने हो भने जनताले त्यो चाउचाउलाई अझ बढी माया गर्नेछन् । यता जनताबाट उठाएको ठूलो रकमबाट चौधरीले अर्को त्यस्तै विश्वब्यापी ब्रान्ड खडा गर्न सक्छन् । नेपालमा होटल, एयरलाइन्स, केवलकार, सुपरमार्केट, जलविद्युत् आदिलाई जनताको हातमा दिन सकिन्छ । अहिले विद्ययमान नीतिले त उद्योगपति धनी हुँदै जाने र त्यो देखेर कामदारमा असन्तुष्टि बढ्दै जाने देखिन्छ । बेला बेलामा कम्पनीभित्र मालिक र मजदुरबीच समस्या आउने कारण पनि यहि हो ।
यहाँको भ्रष्ट राजनीतिमा यस्तो कुरा सम्भव होला ?
हो, राजनीतिमै सुधार आउनुपर्छ जनतामा देश प्रेम पनि उत्तिकै हुनुपर्छ । कडा कानुनको व्यवस्था हुनुपर्छ । अमेरिकामा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति शासन छ । कोही दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी हुन पाउँदैनन् । कोरियामा एक कार्यकाल मात्र छ । राजनीतिमा केही वर्षका लागि समाजसेवा गर्न मात्र गइन्छ । यहाँको जस्तो कुनै काम नभएका बेरोजगारहरूले राजनीति गर्दैनन् ।
नेपालको विकास कल्पना हो कि वास्तविकता ?
कृषिप्रधान देश भएर पनि हामी ५० अर्बभन्दा बीढको अन्न विदेशबाट मगाउँछौ । मेरो विचारमा तरकारी, फलफूल, मासु र अन्न विदेशबाट ल्याउनु हुँदैन । कोरियामा पनि यही नीति छ । विदेशबाट आउने अन्नमा कोरियाले ५ सय १ प्रतिशत भन्सार लगाउँछ । नेपालमा पनि विदेशबाट आएको रक्सीमा ६ सय प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ । यो नियम तरकारी, फलफूल, मासु र अन्नमा पनि लगाउनुपर्छ । यसो हुनेबित्तिकै भारतबाट आउने प्याज र चिनबाट आउने लसुन रोकिन्छ र त्यस्ता वस्तु नेपालमै उत्पादन हुन थाल्छन् । त्यसो नगर्ने हो भने विदेशमा डेट एक्सपायर हुन लागेका अन्न सस्तो मूल्यमा नेपाल आउँछन् र नेपाली किसानले आफ्ना उत्पादनको मूल्य पाउँदैनन् । आज कृषिमा जनताको रूचि कम हुनुको कारण यही हो ।
विकासको मोडलमा के–के गर्न सकिन्छ ?
अहिले गाउँ–गाउँमा विकासका लागि नगद पठाउने चलन छ । मानौं एउटा गाउँमा विकासका लागि ३ लाख रकम गयो रे । त्यो ३ लाखमध्ये १ लाखको काम हुन्छ, १ लाख राजनीतिक दल तथा कर्मचारी बीच मिलिभगत हुन्छ र १ लाख ठेकेदारको नाफा हुन्छ अर्थात् ३३ प्रतिशत मात्र विकास हुने गरेको छ ।
कोरियामा भने ३ लाख सहयोग गर्नु छ भने त्यो रकम बराबरको जिन्सी सामान गाउँ जान्छ । सिमेन्ट चाहिएको हो भने सरकारले सिमेन्ट पठाउँछ, रड चाहिएको हो भने रड पठाउँछ । इन्जिनियर चाहिएको हो भने दक्ष जनशक्ति पठाउँछ । बाँकी श्रमदान जनताले गर्नुपर्छ । आफूले गरेको काममा जनता इमान्दार हुन्छन् । मैले आफ्नो गाउँमा यही मोडलमा काम गरिरहेको छु । त्यहाँ तपाईं कुनै जग्गा खाली भेट्नुहुन्न । कोही बेरोजगार भेट्नुहुन्न । वर्षको ५ महिना कलेज छुट्टी भएका बेला नेपाल आउँदा मैले यति गर्न सक्छु भने सरकारले किन गर्न सक्दैन ? जनताले किन गर्न सक्दैनन् ?
प्रकाशित मिति : २०७३ जेठ १४ (May 27, 2016)